UKUTYWINWA KWEENZUZO KUNYE NENGXAKI - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Ukutywinwa kweeNzuzo kunye neNgxaki
Apha sabelana ngokutywinwa kweepawusti zenzuzo kunye nokubi kubandakanya ukuba kutheni befuna ukutywinwa kunye nemibuzo edumileyo malunga nokutywina i-hardscaping esekwe kwi-paver. Xa ugubungela umhlaba ngezinto ezinje ngekhonkrithi okanye iipavile, yaziwa ngokuba yi-'hardscaping '. Imathiriyeli ye-hardscape kufuneka ime ebantwini, kwifenitshala nakwizithuthi eziza kubekwa ngaphezulu kwayo, ngelixa ikwindawo ehlala itshintsha. Utshintsho lwemozulu kunye nobushushu luchaphazela iipavile okanye ikhonkrithi kunye nomhlaba obajikelezileyo.
Ipeyinti luhlobo oluthile lwe-hardscaping eyenziwe ziimilo ezizodwa, ezibekwe kwipateni. Iipavile ngokwazo zihlala zenziwe ngekhonkrithi. Amatye endalo enziwe ngezinto ezifana negranite, imarble kunye nesileyiti nazo ziyathandwa. Xa zisetyenziselwa i-hardscaping, izitena nazo ziqwalaselwa njengeepavili.
Apha ngezantsi siza kugubungela ukuba iipavile kufuneka zitywinwe na, ukuba ukutywina kuthintela ukhula ekukhuleni, kwaye sixoxe ngeendlela ezahlukeneyo zokutywina paver patios . Okokugqibela, siya kukufundisa ukuba ususa njani ukutywina kwii pavers kwaye unike iingcebiso malunga nabathengisi abaphambili kwimarike.
Kutheni iiPavers zifuna ukuTywinwa?
Ukutywinwa kweePavers Pros
Ukutywina iiPavers Cons
Ngaba iipavile kufuneka zitywinwe?
Ngaba ukutywina izithintelo kuthintela ukhula
Indlela yokutywina iiPavers
Kude kube nini ulinde ngaphambi kokutywina iiPavers
Uzicoca njani iiPavers ngaphambi kokutywina
Ungatywina njani iiPavers ngeSanti
Ususa njani ukutywina kwiiPavile
Ukutywinwa okutywiniweyo ngokungatywinwanga
Elona tywina liBalaseleyo lePeyinti yeKhonkrithi
Izizathu zokufaka iipavile zicacile. Zihombisa iindawo ezingaphandle kwaye zenza kube lula kwaye zikhululeke ngakumbi ukuchitha ixesha kuzo. Inokonyusa nexabiso lekhaya lakho.
Nangona kunjalo, zifuna ukugcinwa ukuze zigcinwe zicocekile kwaye zicocekile. Ukuba umaleko wesiseko awutyebanga ngokwaneleyo okanye iipavile zabekwa ngokungekho semsebenzini, zinokuphazama emva kotshintsho kubushushu bomhlaba.
Ukhula lungakhula phakathi kweentanda kwaye kufuneka lususwe. Ubundlobongela bunokwakha iipheyile, ezifuna ukucocwa okusebenzayo ukubuyisela inkangeleko entsha kunye nokunciphisa ukutyibilika.
Esinye isisombululo abanokuthi basilandele abaninikhaya kukutywina i-hardscaping yabo esekwe kwipara. Isitywina seekhemikhali senza isithintelo sokukhusela esinxibe iipavile, siphucula umjelo opheleleyo we-hardscaping yakho, kwaye ujongeka umhle.
Ewe kunjalo, kukho iingxaki, nazo. Ukutywinwa kokutywina kuthatha ixesha, kuthwala iindleko ezongezelelweyo, kwaye akusosigxina. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo impembelelo yokusingqongileyo yayo nayiphi na into esetyenzisiweyo kwi-hardscaping.
Nazi izinto zokutywina iingenelo kunye neengozi eziqala ngeenzuzo.
Amisa amanzi ekudluliseni iipavile - Isizathu sokuba uninzi lwabantu luqwalasele i-pavers kungenxa yokuba bafuna ukukhusela utyalo-mali abalwenzileyo kwi-hardscaping. Uninzi lwezixhobo ezisetyenziselwa ukwenza iipavile, ezinje ngekhonkrithi, izitena kunye nelitye, zine porous.
Oko kuthetha ukuba amanzi anokufumana indlela yawo ekungeneni nasekujikelezeni ipavile, ekhuthaza ukungunda, ukungunda, ubulembu, okanye ingca ukuba ikhule. Ukutywina iipavile zakho kudala isithintelo esingangenisiyo, ukugcina amanzi ngaphandle.
Inceda ukugcina iipavile endaweni -Ingubo ekhuselekileyo yesitywina ayizukukhusela kuphela iipavile, kodwa ikwanyusa nomsele kwindawo yakho yangaphandle. Iiparawe ezibekwe kwisiseko esomeleleyo zihlala endaweni.
Xa amanzi engena ngeepavile kunye namachibi esiseko, ukutyibilika kunye nezilayidi ziqala ukwenzeka. Umaleko wetywina uya kuthintela amanzi ekungeneni kwisiseko, awalathise macala e-hardscaping.
Cinga ukongeza umda wegrabile ngaphandle kwepatio yakho, indlela yokuhamba, okanye ithambeka lamanzi angcono.
Unokuthintela iipavile ekuhambeni nasekuqhekekeni -Ukuba i-hardscaping yakho ibekwe kwindawo enamaqondo obushushu obushushu, unayo enye ingxaki. Amanzi angena kwizakhelo aya kwanda xa ebanda.
Olu lwandiso lunokubangela ukuba iipavile ziphule okanye zityhale kude. Ayisiyo kuphela eyonakalisa ukubonakala kwe-hardscaping, inokudala ingozi yokukhubazeka. Ngelixa iipeyinti ezitywiniweyo zifuna ulondolozo, kuya kufuneka zikuthintele ekubeni ubeke endaweni kwakhona okanye ukubeka kwakhona iipavili ezizodwa.
Iipawers ezitywiniweyo zikhangeleka ngakumbi - Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu zokutywinwa kweziphawuli azinanto yakwenza nokusebenza, nayo yonke into enokwenza neesthetics: iipeyinti ezitywiniweyo zibukeka zintle.
Nawuphi na umtywina owusebenzisayo uya kuphucula umbala wendalo welitye. Uninzi lwamatywina lubonisa ukuqaqamba, ukukhanya okukhanyayo okugqibela okubolekisa iipavive ngombala ococekileyo, omanzi.
Inceda ukumisa iipavile ekuphelelweni -Izinto ezibekwa ecaleni kuyo nayiphi na into zinokuphela xa ziveliswa yimitha ye-UV. Ukutywinwa kwamatywina kuthintela ukuphela ngokusetyenziswa kwe-UV yokuvimba kunye / okanye i-UV, kwaye kugcina i-hardscaping yakho ikhangeleka intsha ixesha elide.
Ngoku ukuba uyazazi izibonelelo zokutywina iiseyile, masithethe malunga neengxaki.
Ukongezwa kweendleko zokugcina -Ukuba ugqibe kwelokuba utyalomali kwi-hardscaping, ukutywina iipavity kusenokwenzeka ukuba azichazwanga kuhlahlo-lwabiwo mali. Yinkcitho eyongezelelweyo, engaphambili efuna ukulungiswa nokuba kungexesha okanye kungekudala emva kofakelo.
Kwaye ayisiyondleko yexesha elinye kuphela, nokuba- akukho nto ihlala ngonaphakade. Ukusetyenziswa kokuqala kwetywina ngokubanzi yeyona nto ibiza kakhulu, kodwa kufuneka ithengiswe rhoqo.
Ukutsiba ulondolozo rhoqo kunokuthetha ukususa isitywina kunye nokuqala kwakhona -Ukuba ulinda ixesha elide ukuba uphinde uphinde uphinde utywine, kwaye kuya kufuneka ukhulule ngaphambi kokuba ufake enye imveliso ekhuselayo.
Oku kuthatha ixesha kunye nemali. Sebenzisa ukujiya, ukutyeba okusemgangathweni ophezulu kuya konga imali ekuhambeni kwexesha njengoko kungasayi kubakho indawo yengubo yetywina rhoqo.
Ewe, ukuba awuzitywini iipeyinti zakho, uya kuhlala unendleko zokugcina. Ukucoca iipavile, ukubuyisela iiphuli ezaphukileyo okanye eziqhekekileyo, mhlawumbi uphinde ubeke onke amacandelo ukuba isiseko asiphumelelanga ngenxa yokufuma okungaphezulu.
Ukushiya isiphelo se-hardscaping yakho ezandleni zezinto ezinobungozi. Ukutywina kunye nokuthengisa kwakhona yindleko eyongezelelweyo, kuyinyani, kodwa ubuncinci yindleko onokuyicwangcisela.
Impembelelo yokusingqongileyo ngelixa ufaka isicelo Okokugqibela, jonga ifuthe lesitywina setywina kwindalo esingqongileyo. Amatyholo okanye iibhedi zezityalo ezikufutshane nepheyiji kufuneka zigqunywe kakuhle ngeplastiki ukuze zingagutyungelwa kukutywina okanye ukuhambisa ngaphezulu.
Ukutywinwa kwe Paver kufuneka kwenziwe kuphela ngomhla ocacileyo, ozolileyo, ukuthintela ukuba ungangeni kwiyadi yakho okanye egadini.
Ingozi yokhuseleko ngelixa usebenzisa i-paver sealer -Kuya kufuneka ukuba ucinge ngendlela onokuzikhusela ngayo kunye nekhaya lakho kwi-sealer overspray.
Ukunxiba iimpahla ongazikhathalelanga, ikhaka lobuso kunye nokuphefumla sisiqalo esihle. Ukutywina akuyi kuphuma kwilaphu, ke qiniseka ukuthatha nayiphi na ifenitshala yepatio okanye iiambrela ngaphakathi ngaphambi kosuku lwesicelo.
Ngokuqinisekileyo, ii-pavers ezitywiniweyo zibukeka ngcono, ziphucula amanzi, kwaye zihlala zikhuselekile. Zonke ezo zinto zilungile ukuba nazo, kodwa ngaba ziyimfuneko ngokwenene?
Oko kuxhomekeke kwimeko. Iipavile ezibekwe kakuhle ezinesiseko esomeleleyo kunye nomsele ococekileyo, obekwe kwimozulu eshushu kunye nakwindawo enesithunzi akunakufuneka ukuba uphathwe.
Besiya kufuna ukucocwa kunye nokugcinwa rhoqo. Nangona kunjalo, akukho meko apho i-hardscaping ingaphuculwanga ngokuyitywina.
Ukuba umjelo wakho ungaphantsi kokugqibeleleyo, iipavile zakho ziveliswa kukukhanya kwelanga, okanye indawo yakho ifumana amaqondo obushushu aqandayo, ukutywina kubalulekile ukukhusela utyalomali olwenzileyo.
Ngegama: Ewe. Ngokwenza isithintelo esingenakunqunyulwa phezu kweepheyinti zakho, i-paver sealer ivimbela naluphi na ukhula ekuqhekekeni phezulu.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, itywina litywina amalunga phakathi kweepheyiji, iguqula isanti evuthayo ibe ludaka oluqinileyo kwaye isuse ithuba lokukhula kokhula.
Ukutywina iipavile yiprojekthi ye-multistep. Kuqala, kufuneka ucoce kwaye ulungiselele iipavity zokutywina. Emva koko, kufuneka kudityaniswe isanti edibeneyo kwimimandla phakathi kweepavita. Okulandelayo, kusetyenziswa amanzi ukuseta isanti edibeneyo. Iipavile kufuneka zicocwe kwakhona ngaphambi kokuba kufakwe itywina.
Ukutywina kuhlala kufakwa kwiziciko ezibini ezingcakacileyo. Isitshizi yindlela ekhethiweyo yokwenza isicelo.
Iidyasi ezimbini zetywina, ezifakwe ngaphandle kweeyure ezingama-2-3 kwaye zivunyelwe ukuba zome ngokupheleleyo, kufanelekile. Musa ukusebenzisa kakhulu - iipavile kunye neendawo zokudibanisa akufuneki zifakwe, zimbozwe nje kancinci.
Ngokufanelekileyo, ungatywina iipaneli ngokukhawuleza nje ukuba zifakiwe, ngaphambi kokuba kukho nakuphi na ukungcola okuqokelelweyo. Isanti edibeneyo kufuneka isethwe ngamanzi ngaphambi kokuba kufakwe ii-sealing, kwaye le nkqubo inokuthatha usuku okanye ezimbini, kuxhomekeke kubungakanani be-hardscaping yakho.
Abanye abafaki bacebisa ukulinda iintsuku ezimbalwa ukuvumela isiseko, iipavile, kunye nesanti edibeneyo ukuba ihlale phambi kokufaka isitywina.
Ukuba uthathe isigqibo sokutywina iipavile ezazifakwe ngaphambili, inyathelo lakho lokuqala liya kuba kukubabuyisela kwimeko entsha. Sebenzisa i-screwdriver ukukhupha naluphi na ukhula, kwaye unqande ukubuya kwabo ngesibulali sokhula sentengiso okanye esenziwe ekhaya.
Ukucoca iipavile kubalulekile kwinkqubo yokutywina. Ukungcola, uthuli kunye nobumdaka kuphazamisa ukusebenza komtywina, kwaye xa sele uwatywinile, ayinxalenye esisigxina ye-hardscaping yakho.
Ungazikhuhla iipavile ukususa ingqokelela usebenzisa ibrashi eyomeleleyo, kodwa iwasha yamandla iya kukhawuleza kwaye ibelula. Banokurenta ngenjikalanga okanye ngempelaveki kumaziko amaninzi okuphucula amakhaya.
Ividiyo malunga nendlela yokuCoca kunye nokuTywina iiPavers:
Kukho iindidi ezintathu zesanti ezinokusetyenziselwa ukuzinzisa iipavita; isanti edibeneyo rhoqo , isanti edityanisiweyo esebenzayo , kunye isanti edibeneyo eyenziwe ngamanzi . Ezimbini iindlela zokukhetha ziya kunceda ukuthintela ukhula ekubeni lukhule phakathi kweepheyinti zakho.
Isanti edibeneyo yePolymeric ijongeka ngathi sisanti yesiqhelo, kodwa xa kusongezwa amanzi, isanti evulekileyo iyaqina ibe ngumqobo njengodaka. Oku kuthintela ukhula ekubeni lukhule phakathi kweepheyinti zakho, kodwa ayizukuzikhusela iipavile ngokwazo.
izibhambathiso zomtshato ezingezizo ezesintu ezihlekisayo
Isanti edibeneyo esebenza ngokutywina isebenza ngokufanayo kwisanti ye-polymeric, kodwa endaweni yokufuna ukuba amanzi aqinise, ifuna itywina.
Kuya kufuneka usebenzise i-sealant ngqo kumalungu ngaphambi kokuyifaka kumphezulu we-hardscaping, ukuvumela ukungena okwaneleyo. Jonga kumvelisi wemveliso ukufumana imiyalelo eneenkcukacha.
Isanti edibeneyo yesiqhelo sisanti elungileyo. Ukongeza amanzi kuya kuyinceda izinze kwaye ihambelane, ukunciphisa ukuhamba phakathi kweepheyinti, kodwa ayizukutywina iipavile okanye amalungu. Ukuba usebenzisa isanti edityanisiweyo rhoqo kwaye awusebenzisi isitywina ngaphezulu kwayo, unokulindela ukukhula kokhula rhoqo phakathi kweepheyile.
Nokuba loluphi uhlobo lwesanti olusetyenzisiweyo, isanti kufuneka igalelwe ngononophelo kwizikhewu eziphakathi kweepheyiji kusetyenziswa ikomityi okanye ifanele. Umaleko wesanti kufuneka ume malunga ne-intshi ye-intshi ngaphambi kokufikelela phezulu. Kuya kufuneka ususe isanti ukuba ugcwalise ngaphezulu.
Zama ukugcina isanti ikwizakhelo ngokwazo kangangoko kunokwenzeka. Shayela ngobunono isanti edityanisiweyo engaphezulu kumphezulu wepheyinti nakumalungu. Thepha iipakethe nge-mallet ye-rubber okanye sebenzisa i-tamper ukulungisa i-pavers kunye nesihlabathi.
Ukumanzisa isanti ngamanzi linyathelo elilandelayo lesanti edibeneyo okanye isanti ye-polymeric. Khumbula ukuba isanti ye-polymeric eyenziwe yasebenza ngamanzi iya kuqala ukuqina yakuba nje imanzi, ke qiniseka ukuba iyile ndlela uyifunayo ngayo ngaphambi kokuba ungeze amanzi.
Sebenzisa ibhotile yokutshiza ukongeza amanzi kumalungu ngaphandle kokuphazamisa isanti. Musa ukufunxa okanye ukunkcenkceshela indawo njengoko oku kungasusa isanti yakho okanye kubangele ukuphuphuma. Mist yonke imizuzu engama-15 okanye njalo, malunga neyure enye, kwaye vumela iipavita ukuba zome.
Ukuba uzuze njengelifa umsebenzi otywinwe ngetywina, unokubona umaleko weplastikhi okanye onamafutha ahleli ngaphezulu kweepheyinti. Isenokungalingani okanye ibe namagqabi.
Ngelishwa, ekuphela kwendlela yokulungisa le nto kukususa isitywina kwaye uqalise ekuqaleni, ngaphandle kokuba unomonde wokulinda iminyaka embalwa ukuba isityikitya sihlaziye ngokwendalo.
Ipeyinti ecekeceke isetyenziselwa ukutshabalalisa ubophelelo phakathi kwesityikityi kunye nepheyinti, kunye nokuxuba isitywina ukuze ikhukuliswe.
Ukususa ukutywina kumanqwanqwa, sebenzisa ibhotile yokutshiza ukogquma umphezulu ngepeyinti encinci. Lindela malunga nemizuzu emithathu ukuze kuchithwe imichiza. Itywina liza kudibanisa nepeyinti encinci kwaye libuyele kwifom engamanzi, enokuthi isulwe ngelagi.
Hlanganisa ipeyinti encinci kumanqwanqwa. Xa i-hardscaping yakho yomile, uyihlolisise kwimizila eseleyo yesitywina, kwaye uphinde inkqubo xa kukho imfuneko.
Amatywina atywiniweyo ayamelana nokukhula kokhula, ukonakala komswakama, ukungunda, ukungunda, kunye nobulembu. Banesiphelo esimenyezelayo esikhazimlayo esigxininisa ukubekwa kwezinto kuyo nayiphi na into.
Nangona itywina kufuneka lisetyenziswe rhoqo emva kweminyaka emithathu ukuya kwemihlanu, inkcitho eyongezelelweyo kunye nomzamo kufanelekile ukugcina i-hardscaping yakho ikhangeleka intsha. Kwaye ukutywina iipavile zakho kuyabakhusela ekuphelisweni lilanga.
Izibhengezo ezingatywinwanga zinembonakalo egqityiweyo kancinci, kwaye imibala inokubonakala ngathi imfiliba. Zifunxa amanzi kwaye zibuthathaka kumonakalo onxulumene nokufuma. Ukunqongophala kwesitywina kuvumela amanzi ukuba angene kwisiseko sepavity, esinokutshintsha xa sisiba ngamanzi.
Izibhengezo ezingatywinwanga ezisetiwe kunye nesanti edibeneyo ye-polymeric ziyanyamezela ukukhula kokhula. Isanti ehlangeneyo esemgangathweni ibonelela ngokhuseleko oluncinci kokhula.
Ndwendwela igalari yethu ukubona iintlobo ze izimvo paver ngezitena .
Abatyibilikisi be Paver beza ngeendlela ezimbini: ukuyilwa kwefilimu, kunye nokungaqali ifilimu. Abatyali abenza imiboniso bhanyabhanya banesiphelo esimenyezelayo, ngelixa ii-sealing ezingezizo ezomfanekiso bhanyabhanya ziya koma zide zigqibe. Nokuba kufanelekile ukusetyenziswa ngekhonkrithi.
Ukukhusela iipavile zekhonkrithi, jonga uphawu 'olungena ngaphakathi'. Ezi mveliso zinyonyoba kuzo zonke iindawo ezinqamlezileyo, zingashiyi sithuba samanzi sokuqokelelana.
Oku kubaluleke ngakumbi kwiziphatho zekhonkrithi, kuba zisengozini yokwanda kunye nokonakaliswa kwesivumelwano xa ukutshintsha kwemozulu. Kodwa ukutywinwa kokutywina akuyeki apho.
Izitywina ezingena ngaphakathi ziya kucoca ezantsi kwi-substrate engezantsi kwepavers, zibonelela ngesiseko esomeleleyo esithintela ukutshintsha.
Ngaba kukho naziphi na izinto zokutywina i-pavers pros and cons that we have missed. Sazise kumagqabantshintshi ukuba uziva ukutywina iipavita kulifanele ixesha kunye neendleko. Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga ukuthelekisa kwethu iipavile vs iipatio zekhonkrithi Apha.
ngubani ivana ixilongo utshatile
iingoma zokungena kwabazali kumsitho womtshato
iingoma zomtshato ezingezizo ezomtshato
Ibarack kunye nemichelle obama yothando ibali
uya kuba sisicakakazi sam amakhadi okuhlonipha